पति-पत्नीको उमेर कति वर्षले अन्तर हुनुपर्छ ? यो एक पल्ट हेर्नुहोस | सुदुरपश्चिम खबर
सायदै होलान्, श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर बराबर भएको धेरै जसो श्रीमतीको भन्दा श्रीमानकै उमेर बढी हुन्छ । तर, कति बढी ? यसको पनि कुनै सीमा छैन । कोही श्रीमान्(श्रीमती १ बर्षका जेठो(कान्छो हुनसक्छन् । कतिमा भने १० वा ११ बर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ ।